Google Chrome: mawduucyada ugu fiican ee biraawsarka muhiimka ah | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Dulucda, dhowr
Chrome waa biraawsarka web par heer sare maanta, waxaana badanaa sabab u ah waxqabadkeeda wanaagsan iyo fursadaha ay ku siiso adeegsadaha habeynta iyo kordhinta. Sababtaas awgeed, waxay noqoneysaa aalad shaqo oo weyn haddii aan ku darno qaar 'ku dar' iyo, si kadis ah, ugu qaabeyno mawduucyada qaarkood.
Waxaan horey u soo daboolnay qaar ka mid ah gelitaanka waxa kordhintu tahay, maantana waa maalintii mawduucyada. Waxaan u soconaa soo qaado mawduucyo kala duwan oo loogu talagalay Google Chrome si aad u hesho qof aad shakhsi ka dhigato biraawsarkaan web-ka caan ku ah iyo sumcad caan ah.
1 Mawduucyada Minimalist
1.1 Maaddada Madow - MKBHD
1.2 Madow iyo caddaan
1.3 Cawl fidsan
1.4 Atom Mid Madow
1.5 Bir mugdi ah
2 Mawduucyo madow
2.1 Horizon Dark
2.2 Mawduuca Madow V3
2.3 Waxyaabaha Qarsoon Mawduuca Madoow
2.4 Madow Morpheon
2.5 Waxyaabaha Mowduuca Madoow
2.6 In ceeryaamo
3 Mawduucyo midab leh
3.1 Bluegreen xabadaha
3.3 Classis Buluug Mawduuca
3.4 Shabakad Fudud
3.5 Qalbiyada casaanka
3.6 Ubax yicib casaan
3.7 Buluug ayaa kacay
3.8 Soojiidashada Skinki
3.11 Liinta ay ku cadaadinayso
3.12 Cawska loo yaqaan 'Strawberries'
4 Mawduucyada la soo koobay
4.1 Midab buluug ah
4.2 Nalalka samada
4.3 Kalabax buluug madow ah
5 Muuqaalka muuqaalka iyo dabeecadaha
5.1 Yosemite ayaa loo waxyooday
5.2 Magaalada iyo buundada ceeryaamo
5.3 Goobaha quruxda badan
5.4 Ubax Cherry
5.5 Dhibcaha roobka
5.7 Qorrax dhaca Australia
5.8 Qorrax ka soo baxa buurta
5.9 Mawduuca ubaxa
5.10 San Francisco habeenkii
5.11 Buundada Brooklyn
5.12 Xeebta xeebta
5.13 jasiiradaha paradisiacal
5.14 Xeebta Virginia
5.16 Jasiiradda jacaylka
5.17 Haro casaan
6 Mawduucyada xayawaanka
6.1 Jacaylka Puppy
6.2 Diiriga badda
6.6 Eyga iyo bisadda
6.8 Wake soo jeedo
6.10 Tiger Cad
7 Mawduucyada adduunka mootada
7.1 Cherorg Lamborghini
7.5 Gawaarida isboortiga
7.8 Xawaaraha mitirka
8 Mawduucyada ku saleysan farshaxanka
8.1 Wareegga Qorraxda
8.2 Maalin roobaadka Totoro
8.4 Geedka Lone
8.5 Faras Dab ah
8.7 Weerarka Titan - Colossal vs Mikasa
8.9 Rinjiga kacsan
8.10 dhexe Park
8.11 Naadiga Horizon Sydney
9 Mawduucyada ciyaarta fiidiyowga
9.1 Caqiidada Assasins IVs IV Calanka Madoow
9.3 Jiirka & Kalkaalinta
9.4 Shimbiraha cadhooday
10 Mawduucyada muusikada
11 Mawduucyada Cinematographic iyo taxanaha TV-ga
11.1 Ciyaarta carshiyada
11.3 Barkad dhintay
12 Mawduucyo teknolojiyad cusub
12.3 Suufka sharciga
12.5 Robotyada Retro
13 Mawduucyada carruurta
13.2 Xiddigta gaaska
14 Sayniska iyo mawduuca mawduuca
14.1 Bandhigga Sayniska Google
14.2 Dhulku meel bannaan
14.3 Habeen Xidig ah
14.4 Nalalka Woqooyi
15 Mawduuca ciyaaraha
Mawduucyada oo ay doorteen inta badan isticmaalayaasha si ay isaga soocdo mawduuca asalka ah ee bog furaha shabakadan weyn.
Maaddada Madow - MKBHD
Atom Mid Madow
Bir mugdi ah
Mawduuc taxane ah oo loogu talagalay Google Chrome oo dhigay lahjadda codadka madow adoo ka saaraya nidaamka midabka cawl-cad ee ka dhex jira Chrome.
Mawduuca Madow V3
Waxyaabaha Qarsoon Mawduuca Madoow
Waxyaabaha Mowduuca Madoow
Mawduucyo midab leh
Waxaa diirada la saaray midabka waxaan leenahay a taxane ah oo mawduucyo ah oo mari kara dhinacyo kala duwan oo naqshadeynta ah, xitaa maxaa ahaan lahaa muuqaallo la taaban karo sida waxa Plumage yahay.
Classis Buluug Mawduuca
Ubax yicib casaan
Buluug ayaa kacay
Liinta ay ku cadaadinayso
Mawduucyada la soo koobay
Qaabab qariib ah oo midabbo adag leh taasi waxay ka kooban tahay qaab kale oo lagu "labisto" Chrome:
Kalabax buluug madow ah
Muuqaalka muuqaalka iyo dabeecadaha
Mid ka mid ah mowduucyada ay ugu jecel yihiin dad badani waa ku qurxin Chrome muuqaalka muuqaalka meel kasta oo aad ka joogto meeraha oo wata sawiro qurux badan oo muujinaya shaashadda kumbuyuutarka.
Yosemite ayaa loo waxyooday
Magaalada iyo buundada ceeryaamo
Goobaha quruxda badan
Qorrax dhaca Australia
Qorrax ka soo baxa buurta
San Francisco habeenkii
Internet isku mid ma ahaateen haddii aan la helin sawirro kittens iyo ey, sidaa darteed mowduucyadan taxanaha ahi waxay si toos ah ula xiriiraan xayawaannada ugu caansan iyo xayawaanka duurjoogta ah.
Eyga iyo bisadda
Wake soo jeedo
Mawduucyada adduunka mootada
Way badan yihiin taageerayaasha adduunka mootada iyo gawaarida heerka sare iyo mootooyinka qaaska ahWaxay ku leeyihiin taageerayaal badan qaybo badan oo meeraha ah. Qaybtani iyaga uunbaa loogu talagalay.
Mawduucyada ku saleysan farshaxanka
Taxane diirada lagu saaray wax kasta oo la xidhiidha dunida fanka si loogu qurxiyo Chrome sawirro, tiyaatarro, iyo inbadan.
Maalin roobaadka Totoro
Faras Dab ah
Weerarka Titan - Colossal vs Mikasa
Naadiga Horizon Sydney
Mawduucyada ciyaarta fiidiyowga
Cayaaraha fiidiyowga ayaa u taagan qaabka ugu caansan ee madadaalada maanta Iyo taxane diiradda lagu saaray jilayaashaas caanka ah iyo cayaaraha ayaa lagama maarmaan ku ah liiskan. Ha moogaanin liistadan mawduucyada loogu talagalay chrome ee lagu ciyaaro videogames:
Caqiidada Assasins IVs IV Calanka Madoow
Jiirka & Kalkaalinta
Un mawduuc gaar ah oo tayo sare leh gitaar gacanta ugu jira melalomaniacyada.
Mawduucyada Cinematographic iyo taxanaha TV-ga
Qaar loogu talagalay shineemo iyo taxanaha telefishanka goos goos badan sida Ciyaarta Carshiga.
Mawduucyo teknolojiyad cusub
Apple, Android iyo Windows waa ereyada qaarkood waxay diirada saareen teknoolojiyada cusub kuwaas oo si xoog leh uga dhex muuqday sanadihii la soo dhaafay.
Kuwa yar yar ee guriga mowduucyadan u adeegi doona noolee kuwa asalka u ah biraawsarka asalka ah.
Sayniska iyo mawduuca mawduuca
Hadaad jeceshahay Dexter iyo xisaabSidoo kale tagida cidhifyada koonkan, mawduucyadani waa kuwo hagaagsan.
Bandhigga Sayniska Google
Dhulku meel bannaan
Habeen Xidig ah
La NBA iyo kubada cagta ayaa isku qasan maadooyinkan tayo sare leh.
Maxaad u malayn mawduucyadan biraawsarka Google Chrome? Miyaad ku dari doontaa wax intaa ka badan liiska?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Mawduucyada ugu fiican ee loogu talagalay Chrome